हे, दैव के भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म, किन चिकित्सक यसरी चुक्छन् बेला बेलामा ? – News Nepali Dainik
हे, दैव के भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म, किन चिकित्सक यसरी चुक्छन् बेला बेलामा ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०१, २०७७ समय: ९:०७:१४
तर, गल्तीवश उनलाई १० गुणा बढी अर्थात् १ सय मिलिग्रामको मोर्फिन दिइँदा उनको कोखको बच्चाको समेत ज्या,न गएको बताइएको छ । ‘साराह हस्सन’ नामक ती महिला आफ्ना पति सन्नी एलमसँग सामान्य ग,र्भावस्थामा स्वस्थ शिशु जन्माउन सो अस्पतालमा पुगेकी थिइन् । मोर्फिन ओ,भरडो,जकै कारण साराह अचेत अवस्थामा पुगेकी थिइन् । फलस्वरूप उनलाई सघन उपचार कक्षमा राखिनुपरेको थियो ।नेपालसमचारपत्रमा खबर छ । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Last Updated on: March 14th, 2021 at 9:07 am